Mpanamboatra sy mpamatsy fiara fitaterana ambongadiny | Berlin
Peroadua ac compressor
Afaka mamokatra compressor tm13-tm31 izahay
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra fantsom-pifamoivoizana Hydraulika matihanina indrindra, Berlin izay misahana manokana amin'ny famokarana compressors amin'ny rivotra sy fiara fitaterana. Ny vokatra familiana dia misy kalitao mivezivezy amin'ny rivotra. Ny mari-pana amin'ny atmosfera sy ny hamandoana dia namboarina ho fitoviana ara-dalàna.
raikitra& Famindrana miovaova
Mamokatra raikitra izahay& Compresseur famindrana miovaova.
Te hahita orinasa mpamily fiara izay manome familiana familiana herinaratra avo lenta? Zahao ity horonan-tsary ity ary fantaro ny antsipiriany misimisy momba ny familiana familiana ESP And Electric amin'ny vidiny ambongadiny avy any Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
Ny vokatray dia aondrana any Eropa, atsimo sy avaratra Amerika, afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'i Azia sns. Manana mpanjifa erak'izao tontolo izao izahay. Ny compressorantsika dia vaovao avokoa, ny singa rehetra dia avy amin'ny mpamatsy OE miaraka amin'ny antoka iray taona. Mpamatsy OE amin'ny ozinina Car izahay.
Manana traikefa 14 taona mahery ‘amin'ny famokarana sy ny famolavolana familiana izahay. Izahay koa dia manome ny marika familiana ambony any Amerika Avaratra sy Russia.